रामबहादुर भने, 'प्रचण्डसँग लड्न तयार छु' : अबको चुनाव प्रचण्ड भर्सेस बादल हुन्छ ! - Kantipath.com
नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापाले आगामी निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग लड्न तयार रहेको बताएका छन् । चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै रामबहादुरले भने, ‘यो विषयमा पार्टीले निर्णय गरेको छैन । आगामी दिनमा पार्टीले निर्णय गरेमा प्रचण्ड भर्सेस बादल हुन पनि सक्छ ।’ प्रचण्ड र बादल दुवै चितवनका हुन् ।
Previous Previous post: एक महिनामा ५९ % ले राजस्व वृद्धि : कुन क्षेत्रबाट कति कर उठ्यो ?
Next Next post: फिस्टो मार्न मेसिनगन चाहिदैन : अब सुदन भर्सेस रामबहादुर हुन्छ !